नमुना गोठ ! गाईभैसीलाई गोठभित्रै छुट्टै पानी खाने धारा (भिडियो) | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
घर आर्थिक नमुना गोठ ! गाईभैसीलाई गोठभित्रै छुट्टै पानी खाने धारा (भिडियो)
नमुना गोठ ! गाईभैसीलाई गोठभित्रै छुट्टै पानी खाने धारा (भिडियो)
१६ असार २०७७, मंगलवार १२:४७
बेनी नगरपालिका–६, एकपाटेमा रहेको राम पशुपंक्षी फार्ममा हरेक गाई र भैसीलाई पानीको धारो र घाँस खाने ठाउँ छुट्टै छ । ९ वटा भैसी र २ होलिस्टन गाईलाई तिर्खा लागेमा धारोमा पानी आउँछ । गोठलाई मार्बलको टायलले चिटिक्क पारिएको छ । गोठ सधै सफा देखिन्छ । फार्मका सञ्चालक राम पौडेललाई पटक–पटक पानी बोकेर गोठमा जानुपदैन् । घाँसदाना लुछाचुँडी गर्लान भन्ने चिन्ता पनि छैन् । दानापानीका लागि फार्मभित्र गरिएको ब्यवस्थापनले कामदार राख्नुपर्ने झन्झट समेत सञ्चालम पौडेललाई छैन् । रोजगारको खोजीमा विदेशमा जान काठमाण्डौमा पासर्पोट बुझाएर फर्किएका पौडेलले पशुपालनमा सक्रिय भएपछि पासर्पोट च्यातेर फालिदिन समेत दलाललाई फोनबाटै जानकारी गराएको बताए ।
करिब पाँचबर्षदेखि ब्यवसायीक पशुपालनमा सक्रिय रहेका यूवा पौडेलले दुध बिक्रीबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि जिल्लामै नमुना फार्म बनाउने अभियानमा जुटेका छन् । ‘गाईभैसीलाई दानापानीमै धेरै समय लाग्थ्यो,‘अहिले समयको बचत भएको छ’ पौडेलले भने । उनका अनुसार फार्मलाई आधुनिक रुपमा ब्यवस्थापन गरेकाले कामदारको समेत आवश्यकता नभएको बताए ।
‘पहिले दानापानी खुवाउँन दुईघण्टा लाग्थ्यो, अहिले छुट्टाछुट्टै बनाइदिएपछि २० मिनेट पनि लाग्दैन’ पौडेलले भने । घरपरिवारबाटै दानापानी र आवश्यक सरसफलाई गर्न सकिने भएपछि आम्दानी बढेको उनको भनाई छ । दैनिक ८० लिटरको हाराहारीमा दुध बेनीबजारमा लैजाने गरेका पौडेलले मासिक डेढ लाखको कारोबार गर्ने बताए । ‘मासिक ६० हजार नाफा छ,‘दुई लाखसम्म कमाउने योजना बनाएको छु’ पौडेलले भने । उनले एउटा होलिस्टन गाईबाट मासिक ५० हजारको दुध उत्पादन हुने बताए ।मासिक १८ सय लिटर दुधलाई प्रति लिटर ८० देखि १ सय रुपैयाँसम्म विक्री गर्ने गरेका छन् ।
जिल्ला मालपोत कार्यालयका कर्मचारी समेत रहेका पौडेलले विहानबेलुकी दुध लिएर बेनी जाने गरेका छन् ।उन्नतजातका घाँस खेती समेत सुरू गरेका पौडेलले घाँस काट्ने मेसिन समेत जडान गरेका छन् । दुईबर्ष भित्र गाईभैसीको संख्या दोब्बर पु¥याउने योजनामा रहेका पौडेललाई भेटेरिनरी अस्पताल पशुसेवा विज्ञ केन्द्र म्याग्दीले साना मोडल फार्म अन्र्तरगत २ लाख ५० हजार अनुदान दिएको छ । अनुदानसँगै पौडेलले थप ५ लाखको लगानीमा फार्म विस्तार गरेको कार्यालयमा बरिष्ठ प्राविधिक सुवास रेग्मीले बताए । ‘गाईभैसी पिच्छे गोठमै धारा जडान गरेको यो पहिलो फार्म हो,‘अनुदानको पूर्णरुपमा सदुपयोग भएको छ’ रेग्मीले भने । उनका अनुसार कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएको अनुदानको सदुपयोग गर्ने किसानहरू ब्यवसायीक रुपमै नमुना बन्दै गएको बताए ।
जिल्लामा ५ वटाभन्दा धेरै गाईभैसीपालनमा सक्रिय कृषकको संख्या ३५ जनाको हाराहारीमा रहेको बताए । म्याग्दी दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । सदरमुकाम बेनीमा छिमेकी पर्वतको जलजला गाउँपालिबाट आउने दुध ह्वात्तै घटेको छ । बेनीबजारमा दैनिक २५ सय लिटर दुध नगरपालिका भित्रबाटै खपत हुने गरेको छ ।